Isikrini se-China ZDS elliptical ubukhulu obulinganayo bokwakha nokukhiqiza | Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
Isikrini sobukhulu obulinganayo se-Elliptical sisetshenziselwa ukwahlukaniswa nge-ore kwe-sinter, i-sinter pellet nemboni yezimayini embonini ye-metallurgical, kanye nokuhlelwa nokusebenza kokuhlola embonini yamalahle. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zemishini ye-sieving yezincazelo ezifanayo, amandla wokucubungula makhulu futhi ukusebenza kahle kokuhlola kuphezulu. Kungukukhetha kokuqala kwesikrini esikhulu sokudlidliza esitshalweni esikhulu sintering, isitshalo se-pelletizing, i-concentrator, isitshalo sokulungiselela amalahle, futhi sithatha indawo efanelekile yesikrini sokudlidliza esikhulu.
Isimiso sokusebenza: ubuso besikrini sesikrini sochungechunge lwe-ZDS sakhiwe izigaba ezintathu ezinama-engeli wokuthambekela ahlukile, okwenza ukushuba kwesigaba ngasinye songqimba lwezinto ebusweni besikrini sicishe silingane; yamukela umthetho we-axis drive ezintathu nokuphoqeleka kokuzijabulisa okuhambisanayo, isimo sokunyakaza sizinzile. Ithrekhi yokunyakaza yebhokisi lesikrini iyi-ellipse, futhi isikrini sokujiya esilinganayo sikulungele ukuthuthwa phambili, ukwakheka kanye nokuhliswa kwento ebusweni besikrini, ngakho-ke inamandla amakhulu okucubungula nokusebenza kahle kokuhlola okuningana kunesikrini esijwayelekile somugqa nokunyakaza okuyindilinga isikrini. Kodwa-ke, lapho amandla afanayo okwelashwa nokusebenza kahle kokuhlola kufana, isikrini sokujiya esilinganayo sinendawo encane yokuhlola, engonga ukonga.
Izici zokwakhiwa: isikrini sokujiya esilinganayo sinebhokisi lesikrini, i-vibrate exciter, uhlelo lokuzihlukanisa lokudlidliza nedivayisi yokudlulisela. Ngokuya ngezindawo zezinto ezihloliwe, okokusebenza kwe-sieve plate kungaba yi-polyurethane noma ingxubevange engagqokani. Ibhulokhi le-eccentric lokudlidliza eliqhutshwa ukuzungeziswa ngemoto ngedivayisi yokudlulisa ehambisanayo. I-ellipticity ne-angle angle yethrekhi yokunyakaza yebhokisi lesikrini iyashintsha.
Imodeli Ukwelashwa umthamo / h Ukuhlola ukusebenza kahle% Powder KW isisindo somzimba
Langaphambilini Ya (k) uchungechunge lwesikrini esikhulu esiyindilinga esiyindilinga
Olandelayo: ZK uchungechunge komugqa isixwayisi screen
I-Wzds Vibration Isikhuthazi
Uchungechunge lwe-ZZSM olwenziwe ngamalahle